उभिएर पानी पिउने गर्नुभएको छ ? तुरुन्तै छोड्नुस् यो बानी ! - यथार्थ खबर
Madhukar Pandey ३ असोज २०७८, आइतवार
उभिएको बेलामा पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ । अझ कोही त उभिएर सासै रोकेर पानी पिउँछन् । यो कहिल्यै गर्नु हुँदैन ।
स्वास्थ्यविज्ञहरूका अनुसार बसेर सानो-सानो चुस्की लिँदै पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ ।
तपाईंले उभिएर पानी पिउँदा यो सिधै पेटमा ओइरिन्छ र आन्द्राको भित्तामा ठोक्किन पुग्छ । यसरी ठोक्किँदा पेटको भित्ता, वरिपरिका अंग र पाचननलीमा हानि पुग्न सक्छ । लामो समयसम्म यसो गर्दा पाचनप्रणाली नै बिग्रन पुग्छ ।
यसरी पानी पिउँदा शरीरले पानी छान्न पाउँदैन र फोहोरहरू मूत्राशय, मृगौला र रगतमा जम्न पुग्छन् । यसले मृगौला बिगार्छ र मूत्रनली पनि खराब बनाउँछ ।
यसरी लामो समयसम्म उभिएर पानी पिउँदा बाथरोग पनि लाग्छ । यसरी पानी पिउँदा शरीरका तरल पदार्थको सन्तुलन बिग्रन्छ अनि जोर्नीहरूमा पानी जमेर बाथरोग लाग्छ । यसरी पिउँदा शरीरको नसामा पनि तनाव आउँछ ।
उभिएर पानी पिउँदा शरीर सधैं सतर्क अवस्थामा रहन्छ जबकि बसेर पानी पिउँदा शरीरले रिल्याक्स महसूस गर्छ । यसरी रिल्याक्स हुँदा नसा शान्त हुन्छ अनि शरीरभित्र पाचन प्रक्रिया सहज हुन्छ ।
उभिएर पानी पिउँदा पेटको अन्नप्रणालीको तल्लो भागमा पानी छचल्किन्छ । यसले अन्नप्रणाली र पेटबीचको जोर्नी (स्फिङ्क्टर) फुल्छ । यसरी स्फिङ्क्टर फुल्दा पेटका अम्ल (एसिड) उल्टो बग्न थाल्छन् र अन्नप्रणालीलाई जलन हुन्छ । यसले अल्सर गराउँछ । यसरी उभिएर पानी पिउँदा पाचनप्रणाली ध्वस्त हुन्छ ।
बसेर बिस्तारै चुस्की लिँदै पानी पिउनु नै उत्तम उपाय हो ।
उभिएर पानी पिउनै हुँदैन भन्ने हैन तर सकेसम्म यसो नगर्नुस् । लामो समय यसो गर्दा स्वास्थ्यमा साह्रै नराम्रो असर पर्छ ।lokaantar